အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Jose77 - ဝီကီပီးဒီးယား
စစ်မှန်ရေ ယေရှုဘုရား၏အသင်းတော် (True Jesus Church)စွာ သီးခြားရပ်တည်ရေ ခရစ်ယာန်ေကျာင်းတော်ဖြစ်ပနာ (တရုတ်)နိုင်ငံ ပီကင်းမြို့မှာ ၁၉၁၇ ခုနှစ်၌ စတင်တည်ေထာင်ရေ။ ယခုလက်ရှိမှာ နိုင်ငံေပါင်း ၄၅ နိုင်ငံ၌ အသင်းသား ၁.၅ သန်းခန့် ရှိရေ။ ဤကျောင်းတော်စွာ ၂၀ ရာစု အစောပိုင်းတွင် ပေါ်ပေါက်လာရေ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ပန်တီကိုစတယ်ေကျာင်းခွဲ (Pentecostal branch of Christianity) အောက်တွင် ရှိရေ။ ခရစ်စမတ်နန့် အီစတာပွဲေတာ်များကို ကျင်းပလေ့မရှိကတ်။ ကျောင်းတော်စွာ ယေရှုသခင် ဒုတိယအကြိမ် ရှင်သန်ထမြောက်ခြင်းမတိုင်မီ နိုင်ငံအသီးသီးသို့ တရားတော်ကို ဟောကြားဖြန့်ဖြူးဖို့ ရည်ရွယ်ရေ။
၁၉၉၂ ခုနှစ်မှစပနာ ဝတ်ပြုရာကျောင်းတော်များစွာ ရန်ကုန် (မြန်မာ)၊ ယခုအခါ တောင်ဖီလာ၊ ပျဥ်ေထာင်ဦး၊ ပြည်ေတာ်သာ ဖလမ်း, နတ်ကြီးကုန်း နန့် ရန်ကုန် ရွှေပေါက္ကံ တို့မှာ တည်ရှိရေ။ စစ်မှန်ရေယေရှုဘုရား၏အသင်းတော်၏ အဓိကဟောကြားချက် ၁၀ ခုမှာ
အဓိကဟောကြားချက် ၁၀ ခု ၁ သန့်ရှင်းရေ ဝိဉာ�ဉ်တော်
Unfortunately, your account clashes with another account also called Jose77. To make sure that both of you can use all Wikimedia projects in future, we have reserved the name Jose77~mywiki that only you will have. If you like it, you don't have to do anything. If you do not like it, you can pick outadifferent name.
၀၃:၅၃၊ ၁၈ မတ် ၂၀၁၅ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Jose77&oldid=246639" မှ ရယူရန်
၂၁ ဇွန် ၂၀၁၅၊ ၀၉:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဇွန် ၂၀၁၅၊ ၀၉:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။